akka dirqaleetti, Qusachuu jefuraa akka ulaagatti ida'uu dandeessa wanta waraantoo irra deebi'ame rogeeffame of keessa qabu qusachuuf.
VarName: Maqaa jijjiiramaa ykn waraantoo kamuu.
Start, End: Gatiin lakkoofsaa ykn seranaa kan lakkofsa miseensota(NumberElements=(end-start)+1) fi hangii kasaa ifteessan.
Yoo RemDim sadarkaa adeemsarratti fayyade Start fi End himannoowwan lakkoofsaa ta'uu danda'u.
VarType: Jefuraan kan akaakuu deetaa jijjiiramaa labsu.
Jefuraa: Akaakuu jijjiiramaa
Bool: Jijjiiramaa Buuliyaanii(Dhugaa, Soba)
Dachaa: Jijjiiramaa qabxii bololiyaa dachaa(1.79769313486232x10E308 - 4.94065645841247x10E-324)
Dheeraa: Jijjiirama itergaa dheeraa (-2,147,483,648 - 2,147,483,647)
Wanta: Jijjiirama wantaa (hubachiisa: Jijjiiramaan kun tuuta waliin qofa tartiiban ifteeffamuu danda'a!)
[Single]: Jijjiiramaa qabxii bololiyaa baaqqee(3.402823x10E38 - 1.401298x10E-45). Yoo jefuraan ifteeffame,jijjiiramaan akka baaqqetti qindeeffama,yoo himni DefVar dhaa hanga DefVar hin fayyadamne.
Diraa: Jijjiiramaa diraan arfoota ASCII olaantoo 64,000 of keessaa qaba.
Addaba'aa: Akaakuu jijjiiramaa addaba'aa (akaakuu hunda of keessatti qabachuu danda'uu fi hiikkoon qindaa'uu).
LibreOffice Basic keessatti, jijjiiramtoota ifaan labsuun si barbaachisu. Haa ta'u malee, waraantoo fayyadamuun dura labsuu si barbaachisa. Jijjiiramaa hima Dim wajjiin labsuu dandeessa, labsoota baay'ee addan baasuuf qoodduu fayyadamuu. Akaakuu jijjiiramaa labsuuf, arfii akaakuu labsii maqaa duuka bu'utti galchi ykn jefuraa walitti dhufoo fayyadami.
Hangii kasaawwan Waraantoo hima Dim wajjin lallabame qindeessuuf, tooftaalee lamatu jiru:
DIM text(20) As String REM miseensota 21, 0 hanga 20 tti lakkaawwame
DIM text(5 to 25) As String REM miseensota 21, 5 hanga 25 tti lakkaawwame
DIM text$(-15 to 5) As String REM miseensota 21 (0 Dabalatee),
rem lak -15 hanga 5
Yoo dirreewwan jijjiiramaa , akaakuu malee, ReDim dhaan bakka sadarkaa adeemsaa karqurxa ykn faankishinoota keessatti rogni baafameef, dirreewwan kun kamaatii taasifamuu ni danda'u. Hangii waraantoo al tokko qofaa qindeessuu kan dandeessu yoo ta'u,kana boodas fooyyessuu kan hin dandeenye dha. Adeemsa keessatti, hima ReDim himatawwan lakkoofsaa wajjin hammamtaa dirreewwanii hiikuuf , waraantoo lallabuu ni dandeessa.